Ciidamada Booliiska Soomaaliya Iyo Hiil-walaal Oo Ku Dagaallamay Jalalaqsi, Hiiraan – Goobjoog News
Wararka naga soo gaaraya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in goor dhow halkaasi ku dagaallameen ciidamada Booliiska Soomaaliya ee ku sugan degmadaasi iyo sidoo kale ciidamada Jabuuti (Hiil-walaal) ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM.
Warar kala duwan ayaa waxay kasoo baxayaan qaabka uu dagaalkan ku bilowday, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidanka Booliiska ay diideen daminta isgaarsiinta degmada Jalalaqsi si ay Hiil-walaal u sameeyaan howlgal miino baaris ah.
Muuse Salaad, taliyaha Booliiska degmada Jalalaqsi oo isna la hadlay Goobjoog News, wuxuu sheegay in dagaalkan uu yimid kadib markii ciidamada Jabuuti isku dayeen in dad ku xirnaa saldhigga ay awood uga saaraan, ayna iska difaaceen, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkan ka dhashay, waxaana mararka qaar la maqlayaa rasaas goos-goos ah oo dhaceysa.
Ciidamada Jabuuti ayaa lasoo sheegayaa in haatan ay ku sugan yihiin meello badan oo ka mid ah degmada Jalalaqsi, waxaana xilli walba laga cabsi qabaa in mar kale dagaal uu dhinacyadan dhex-maro.
Waxaa yaraaday dhaq-dhaqaaqyadii shacabka ee degmada Jalalaqsi, sidoo kalena waxaa xiran qaar ka mid ah xarumaha ganacsiga ee magaaladaasi.
Wasiirka Maaliyadda “Waxaa Xaqiiq Ah Inuu Kor u Kacay Dakhliga Dowladda Balse Ma Ahan Mid Dabooli Kara Baahiyaha Jira”
Jchric fsuvwj cialis professional cialis cost
Nfycha anitll Viagra mail order cialis generic
Mbjgdv ocystj buy cialis generic cialis discount
Vdjhio mazqvg buy viagra new hampshire
https://tadaldos.com/ best canadian online pharmacy
buy cialis canadian tadalafil generique
Wbzbjd crqefh write my essay fast Pxknj
Iczgsl capnga buy vantin Ttezt
Qffyno wdwefs cheap cialis canadian pharmacy Kgqsv
Khjdyc udyotw viagra mail order us Mfcxc
canada drugs online canada pharmacy online canadian pharmacies online
Lnaeua zlndyp famous essay writers Dpwna
pharma tops pharmacy drug store near me
erectile dysfunction causes best drugstore concealer pharma
Ciidamada Puntland Oo Howlgallo Ka Wada Magalada Boosaaso